२०२० मा फोल्डेबल फोनले राज गर्दै ! यस्तो छ कम्पनीहरुको तयारी
काठमाडौं । सन् २०२० मा मोबाइल फोनको दुनियामा सबैको नजर फोल्डेबल फोनमाथि हुनेछ । विश्वकै सबै भन्दा ठूला–ठूला कम्पनीहरुले सन् २०२० लाई फोल्डेबल फोनको नाम राख्न चाहन्छन् ।
केही कम्पनीहरुले आ–आफ्नो सेगमेन्टको फोल्डेबल मोबाइलको झलकहरु देखाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
२०२० मा कुन–कुन फोल्डेबल फोन आउँदैछन् ?
ह्वावे मेट एक्स :
ह्वावे पनि फोल्डेबल फोनको दौडमा सामेल छ । कम्पनीले आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट (Huawei Mate X) चीनमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जानकारी अनुसार अर्को वर्ष यस फोन भारत र नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध हुनेछ ।
यस फोन फोल्ड नगरीकन ८ इञ्चको छ, जसले यसै फोनको अन्य सेगमेन्टलाई टक्कर दिइरहेको छ । यस फोनलाई फोल्ड गर्दा ६.६ इञ्चको बनाउन सकिनेछ ।
पछिल्लो समय बजारमा धेरै विक्री हुने फोन ओप्पोले फोल्डेबल फोन उत्पादनमा पछि हटेको छैन । कम्पनी पनि यस नयाँ सेगमेन्टमा आइसकेको छ । २०२० मै तपाई/हामीले ओप्पोको फोल्डेबल फोन देख्न र प्रयोग गर्न पाउनेछौं ।
ह्वावेको जस्तै गरी ओप्पो फोनको स्क्रिनलाई पनि फरक तरिकाले मोड्न सकिनेछ । तर, कम्पनीले यस फोनलाई कहिले सार्वजनिक गर्छ ? भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । २०२० मै कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
माइक्रोसफ्ट सरफेस डुओ
माइक्रोसफ्ट पनि आफ्नो नयाँ फोल्डेबल फोनलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । २०१९ मै कम्पनीले माइक्रोसफ्ट सरफेस डुओ (Microsoft Surface Duo)को बारेमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
कम्पनीले आफ्नो ९ इञ्चको स्क्रिनको साथमा यस प्रोडक्टलाई एक किताब जस्तै पेश गर्दैछ ।
सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड :
कोरियन कम्पनी सामसुङले आफ्नो नयाँ फोल्डेबल फोन ल्याउदैछ । यसमा सबै भन्दा पहिले सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड (Samsung Galaxy Fold)को नाम अगाडि आउँछ । फोल्ड गरेर यस फोनको स्क्रिन ४.६ इन्चको हुने बताइएको छ । तर, फोनलाई पूरा खोल्दा ७.३ इञ्चको हुनेछ ।
यस फोल्डेबल फोनलाई प्रयोगकर्ताले फोन र ट्याबलेट दुवै तरिकाले प्रयोग गर्न पाउनेछ । पहिलो पटक यस फोन १२ जीवीको -याममा उपलब्ध हुनेछ । साथै कम्पनीले यस फोल्डेबल फोनमा ७–नानोमेटर (7-Nanometer) प्रोसेसरको प्रयोग गरेको छ ।
मोटोरोला रेजर् :
फोल्ड हुनेवाला फोन उत्पादनमा चिनिया कम्पनी मोटोरोला पनि पछाडि छैन । कम्पनीले आफ्नो बहु–प्रतिक्षित फोन मोटोरोला रेजर् (Motorola Razr) बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैज्ञानिकहरुको चार वर्षको लामो मेहेनतपछि २६ प्रोटोटाइप तयार गरेको कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ ।
सोही प्रोटोटाइमले यस फोनलाई फोल्ड हुने या खुल्ने बनाउनका लागि सम्भव बनाएको हो । १५ मेगापिक्सलको क्यामेरासहितको यस फोनले एप्पल र सामसुङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।